တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိရှိသူတွေ မစီးရဲကြတဲ့ ရိုလာကိုစတာများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingတော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိရှိသူတွေ မစီးရဲကြတဲ့ ရိုလာကိုစတာများ
September 24, 2021 Yan Amazing 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိရှိသူတွေ မစီးရဲကြတဲ့ ရိုလာကိုစတာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ရိုလာကိုစတာတွေက စီးဖို့တောင် ကြောက်စရာကောင်းနေလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Outlaw Run
ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ Outlaw Run လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ရိုလာကိုစတာ ကိုတော့ သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ( ၇၂၀ ဒီဂရီ ) လှည့်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်တစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ ဒေါ်လာ ( ၁၀ ) သန်း ရှိပြီး Ozark တောင်တန်းတွေကို ဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ စီးတဲ့ အခါမှာလည်း အမြင့် ( ၁၆၂ ) ပေ ကနေ အောက်ကို တရှိန်ထိုးဆင်းသွားပြီး ဆင်းနေတဲ့ အချိန်မှာလည်း ခေါင်းကြီး လည်သွားအောင် လှည့်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂၀၁၅ ) ခုနှစ်ကတော့ Outlaw Run ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယ အမြန်ဆုံး သစ်သား ရိုလာကိုစတာ အဖြစ် ဂင်းနစ် စံချိန် ဝင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ GateKeeper
Cedar Point’s GateKeeper လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ ကတော့ ကြမ်းလွန်းလို့ မွန်းစတား ဆိုပြီးတောင် နာမည်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီရိုလာကိုစတာ ဟာ တစ်နာရီကို ( ၆၇ ) မိုင်နှုန်း အရှိန် နဲ့ သွားပြီး အရှည်ကတော့ ( ၄၁၆၄ ) ပေ ရှိပါတယ် ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ရိုလာကိုစတာရဲ့ တောင်ပံတွေကို လူထိုင်ဖို့ ဖန်တီးထားပြီး စတီးလ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ GateKeeper ရိုလာကိုစတာကို မစီးခင် အစာ မစားဖို့ အကြံပေးထားကြပြီး အမြင့်ပေကတော့ ( ၁၆၄ ) ပေ ရှည်ရှိပြီး ကြာချိန်ကတော့ ( ၂ ) မိနစ် နဲ့ စက္ကန့် ( ၂၀ ) ကြာပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Millennium Force
နောက်တစ်ခါ ပြောပြပေးမှာကတော့ Millennium Force လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ ရိုလာကိုစတာရဲ့ အရှည် ကတော့ ( ၃၁၀ ) ပေ ရှိပြီး တစ်နာရီကို ( ၉၃ ) မိုင် အရှိန် နဲ့ မောင်းပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အမျိုးအစားကတော့ giga coaster အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး တောင်ကုန်း အမြင့်တွေပေါ်တက်ပြီးမှ အရှိန် နဲ့ ပြန်ဆင်းချပြီး မြေပေါ်ကို ငုပ်လျှိုးပြီး ဝင်သွားတဲ့ ရိုလာကိုစတာ အမျိုးအစား အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထား တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဓာတ်လှေကား ကေဘယ် စနစ် ပါဝင်တာကြောင့် အမြင့်ပေ ( ၃၀၀ ) အရှည် ကနေ ( ၈၀ ) ဒီဂရီ ထိုးပြီး ဆင်းသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ Manta
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ‌‌Manta လို့ခေါ်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Manta ဟာ ရိုလာကိုစတာတွေ ထဲမှာမှ တစ်ခုတည်းသော flying roller coaster အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီရိုလာကိုစတာ ကို စီးတဲ့ အခါ အစောပိုင်းမှာတော့ ပုံမှန် မဟုတ်ပဲ ချောမွေ့နေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖြတ်သွားရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ စက်ခေါင်းက မြေပြင်ပေါ်ကို တစ်ရှိန်ထိုး ဆင်းသွားတဲ့ ပုံစံမျိုး ပါ ။ နောက်ပြီး လေးကြိမ်လောက် အထက်အောက် လည်ကာ မောင်းနှင်ပေးပြီး သမုဒ္ဒရာ ထဲ ရိုလာကိုစတာ စီးနေတယ်လို့ ခံစားရအောင် အောက်ဘက် ရေကန်ထဲမှာ ပင်လယ်သတ္တဝါ မျိုးစိတ်တစ်ချို့ကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Banshee
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ Banshee လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ အကြောင်းဖြစ်ပြီး ( ၂၀၁၃ ) ခုနှစ်မှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပြီး Banshee ရိုလာကိုစတာ ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံး ပြောင်းပြန် လည်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး လမ်းကြောင်း အရှည်ကတော့ ( ၄၁၂၄ ) ပေ ရှည်ပါတယ် ။ နောက်ထပ် ကောလဟာ တစ်ခုကတော့ ရိုလာကိုစတာ ရှိတဲ့ ပန်းခြံကို ( ၁၉၇၀ ) ခုနှစ်မှာ စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်ကတည်းက ပန်းခြံတစ်ဝိုက်မှာ ထူးထူးခြားခြား အော်သံ တွေနဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို တွေ့ကြုံရတတ်တယ်လို့ ပြောကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ Kingda Ka
အခုနောက်ဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ Kingda Ka လို့ အမည်ရတဲ့ ရိုလာကိုစတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Kingda Ka ကတော့ မြောက်အမေရိက မှာရှိတဲ့ အမြန်ဆုံး နဲ့ အမြင့်ဆုံး ရိုလာကိုစတာ ပါ ။ ဒီ ရိုလာကိုစတာကို စီးမယ်ဆိုရင် တစ်နာရီကို မိုင်ပေါင်း ( ၁၂၈ ) မိုင် အရှိန်ရှိပြီး ဘယ်လောက်တောင် မြန်လဲဆိုရင် ( ၃.၅ ) စက္ကန့်ထဲနဲ့ ( ၉၀ ) ဒီဂရီ ကို ထောင်တက်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး စီးနေရင်း နဲ့ ( ၂၇၀ ) ဒီဂရီ လှည့်ပတ်ပေးကာ တော်ရုံ အသည်းမာတဲ့ သူတွေ တောင် မအော်ပဲ မနေနိုင်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ် ။ အမြန်ဆုံး ရိုလာကိုစတာ ထဲမှာ ပါဝင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ ကြာချိန်ကတော့ ( ၁ ) မိနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာ ကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိရှိသူတွေ မစီးရဲကြတဲ့ ရိုလာကိုစတာများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ကမ္ဘာ့လက်ရာ အဆိုးဆုံးအဖြစ် စာရင်းဝင်သွားခဲ့ရတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်းများ